HMD Nokia na-ahapụ gị ka ị chepụta obere ịgba ụgwọ maka Nokia 3310 | Akụkọ akụrụngwa
Ihe ngosi HMD Nokia 3310 ohuru a ga - ebido na Spain, ọkachasị ọnụ nke gara nke ọma na mmemme Barcelona Mobile World Congress, ga - adị site na Mee 15 ma ọ bụ naanị na Media Markt na ọnụahịa nke 59 euro. N'oge a, na mgbakwunye na nnweta a na-enweghị atụ, ekwesiri icheta na egosiri ọnụ ahụ na agba dị iche iche na mba anyị ọ ga-adị na agba ntụ, ọbara ọbara na odo. Mana nke kachasị mma bụ na ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nwere ike isonye na asọmpi uwa niile iji chepụta obere ụlọ Nokia 3310 ụlọ na Ọ bụrụ n’inwe mmeri, ịnwere ike iji Nokia 3310 nke aka gị were ọrụ gị.
N'echiche a, ụlọ ọrụ HMD Global hapụrụ n'aka anyị nhọrọ nke ị nweta mbipụta pere mpe nke ụlọ Nokia 3310. Maka ndị chọrọ isonye na ya dị mfe. Anyị ga-ebugote atụmatụ anyị na Instagram na hashtag # 3310art wee soro @nokiamobile, nke gunyere nkọwa niile nke asọmpi ahụ. HMD Global na M hụrụ ájá n'anya, ụlọ ọrụ ihe eji eme ihe na Britain, ga-ekpe ikpe n'echiche, okike na ịdị mma nke atụmatụ niile edobere, na-enye ndị nwere nnwere onwe iji mezue atụmatụ pụrụ iche na nke mbụ.
Obi abụọ adịghị ya na asọmpi a nwere ike ịmasị ndị zubere ịmepe nke ngwaọrụ a nke ga-ere ahịa na ụbọchị ole na ole ma nwee ekwentị ma ọ bụ bụrụ naanị ikpe na-enweghị atụ. Enwere ike ịchọta usoro na ọnọdụ ozugbo na Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Nokia ma enwere oge ruo na Wednesde na-abịa, Mee 10, 2017.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » HMD Nokia na - enye gị ohere ịmebe ụdị mkpọtụ pere mpe maka Nokia 3310